“Ma fahmin dhaleeceynta loo jeedinayo Zidane.” – Halyeey kooxda Barcelona ah – Gool FM
(Madrid) 27 Feb 2021. Tababaraha reer France ee Zinedine Zidane ayaa helay dhaleeceeno kala duwan, iyadoo shaki la galinayo booskiisa Real Madrid, kaddib xaallada adag ay gashay kooxda iyo guuldarrooyinkii soo gaaray xilli ciyaareedkan.
Halyeeyga reer Brazil iyo kooxda Barcelona ee Rivaldo ayaa difaacay macalinka Real Madrid ee Zinedine Zidane.
Haddaba Halyeeyga reer Brazil iyo kooxda Barcelona ee Rivaldo ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Real Madrid waxay ciyaar fiican la ciyaartay Atalanta, waxayna ka gaartay guul qaali oo banaanka ah, taasoo xaqiijineysa in Zidane uu yahay tababare weyn.”
“Ma fahmin dhaleeceynta loo jeediyay Zidane, ka dib markii uu ku guuleystay Champions League seddex jeer oo isku xigta, iyo horyaalka La Liga muddo dheer kaddib, wuxuu cadeeyay inuu yahay tababare aan marnaba shaki la galin karin shaqadiisa.”
“Zidane wali wuu gaari karaa guulo, inta lagu gudajiro xilli ciyaareedkaan, maadaama uu mar kale kusoo dhawaaday hogaanka horyaalka La Liga, wuxuuna guul qaali ah ka gaaray Atalanta.”
“Waa in Jamaahiirta iyo saxaafada ay sugaan ilaa iyo dhamaadka xilli ciyaareedka, si ay u qiimeeyaan shaqadiisa, haddii uu xilli ciyaareedka ku dhameysto koob la’aan, waxay noqon doontaa xilligii la isweydiin lahaa waxa uu soo bandhigay.”